I-China 2020 yomenzi ephezulu yeepesenti ezingama-90 ezantsi zokuzalisa iingxowa zokulala ngamaxabiso efektri kunye nabavelisi | Xueruisha
Ukuba usakhathazekile malunga nokuba ungayikhetha njani ibhegi yokulala ngaphandle, le iya kuba yeyona nto uyikhethayo. Le ngxowa yomama oqinileyo yokulala isitayile esiphuculiweyo esidala. Isebenzisa uxinano lwesixokelelwano sokuxinana. Umsantsa phakathi kwemithungo ephezulu kunye nezantsi uyancipha ngokuthe ngcembe. Ukuzaliswa kuhanjiswa ngokulinganayo ngokobungakanani belungu lomzimba, ukwenza ukusongelwa ngokubanzi kube ngcono. Inokugcina ukufudumala okunamandla kunye nezivumelwano zoyilo lwe-ergonomic. Inkqubo ephambili yombala umnyama ngaphandle kwaye bomvu ngaphakathi, oxhathisa ukungcola kunye nefashoni ngakumbi. Ewe kunjalo, ukuba unolunye ukhetho lombala wengxowa yokulala, sikwabonelela ngeenkonzo zokwenza umbala ngokwezifiso. Iindidi zemibala yelaphu ziyafumaneka ukuze ukhethe. Amalaphu ethu angaphandle anyangwa ngamanzi agxothayo kunye neenyembezi, ezilula kakhulu ukuzicoca kwaye zinokucocwa ngokusula kube kanye. Ilaphu lining nayo inyangwa nge-anti-lint, enokuthi isonge ngokugqibeleleyo ukuzaliswa kwangaphakathi. Ukuzaliswa kwale ngxowa yokulala kwenziwa ngedada emhlophe ekumgangatho ophezulu ezantsi, ngobushushu obuphezulu kunye nokugcinwa kobushushu obugqwesileyo. Siye saqulunqa ngokukodwa ubunzima bokuzalisa ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zabantu ezahlukeneyo kubushushu, nokuba ucwangcisa ukuya ekampini, ukunyuka intaba, ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuloba okanye ukuhamba kungasetyenziswa ngokwezinto ezahlukeneyo zokugcwalisa kunye nokuziqhelanisa nobushushu obuhlukeneyo bendalo. . Le bhegi yokulala ithatha ithuba elipheleleyo lokuphamba kwaye ithathe indawo encinci emva kokugcinwa. Ayizukuthatha indawo eninzi ekhaya okanye esiqwini, yenza ukuhamba kwakho kube lula. Sinikezela ngeenkonzo ezininzi ezenzelwe wena, ezinje ngokushicilela i-LOGO, iipateni, ukugcwaliswa, njl., Okanye ukutshintsha ubungakanani bengxowa yokulala ngokweemfuno zakho. Wamkelekile ukudibana kunye noku-odola.
Iingcebiso zokuphucula ubushushu bendawo yokulala
Khetha ubume obufanelekileyo kunye nobungakanani besikhwama sakho sokulala, khetha ibhegi yokulala ethungwe ngokwegophe lomzimba womntu, yile nto siyibiza ngokuba "sisiMama" sebhedi yokulala. Inentsebenzo engcono yokurhangqa, inciphisa indawo yokuhamba komoya, ukwenzela ukuphucula ukugcinwa kobushushu, kwaye kwangaxeshanye kunciphisa ubunzima, ukwenzela ukuba izixhobo zibe nzima. Ukongeza, xa sikhetha iibhegi zokulala, sifana nje nempahla Kuya kubakho ubungakanani obukhulu, obuphakathi kunye nobuncinci onokukhetha kubo, ke kuya kufuneka ukhethe ibhegi yakho yokulala ngokobude bakho kunye nemilo yomzimba. Ukuba indawo yokulala ibanzi kakhulu, sinokufaka ezinye iimpahla ukwenza indawo encinci, ukuze kufezekiswe injongo yokuphucula ukufudumala. Kwakhona, sinokuhlengahlengisa umtya emlonyeni wengxowa yokulala ukuphucula ukufudumala okanye ukusasaza ubushushu.
Egqithileyo 2020 mveliso ubusika abadala inkampu idada / irhanisi phantsi ukulala ibhegi kwihowuliseyili
Okulandelayo: Intengiso eshushu yokuntywila amanzi ebaleka iingxowa zomama ezingangeni nomoya zabazingeli bomkhosi
Sifihle iqokobhe okungangenwa rip-stop m ephathekayo ...
Imvulophu engabalulekanga yokulala nebhedi kunye neSol ...
Imibala evulekileyo yokutshintsha imvulophu enye ...
Imibala emibini yokuthunga imvulophu yokulala ...
2019 New kuyilo umenzi ukukhanya obutofotofo comfo ...
2021 ethandwayo umbala eqaqambileyo phantsi ezaliswe mummy sle ...